Jose Mourinho Oo qaar badan oo ka tirsan Xiddigihiisa nasin doona kulanka Liverpool
HomeWararka MaantaJose Mourinho Oo qaar badan oo ka tirsan Xiddigihiisa nasin doona kulanka Liverpool
Macallinka kooxda Chelsea Jose Mourinho ayaa sheegay inuu wax weyn ka bedeli doono shaxdiisa kulanka Axada soo socota ay kooxdiisa la ciyaari doonto kooxda Liverpool, kadib markii ay kooxdiisa ka quusatay rajadii ay ka lahayd loolanka horyaalka dalkaas. Kooxda Blues ayaa xalay bar-bardhac goolal la’aan ah la dhaafi weyday kooxda Athletico Madrid kulankii ka qeybta ka ahaa lugta hore ee semi- final-ka Champions League, iyadoo kooxdan magaalada Madrid ku soo asiibay dhaawacyo badan iyo kuwa kale oo ganaax ku seegi doona lugta labaad oo ka dhici doona toddobaadka soo socda garoonka Stamford Bridge.
Petr Cech iyo John Terry ayaa dhaawacyo culus ka soo gaadhay kulankan, halka sidoo kale Frank Lampard iyo John Obi Mikel ay lugta labaad ka maqnaan doonan kooxdooda maadaama ay labaduba qaateen jaalihii labaad.
Haddii guul ay Chelsea kusoo gaarto garoonka Anfield Axada waxay labo dhibcood u jirsan doonta kooxda Reds oo haatan hogaamineysa horyaalka, laakiin Mourinho ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay xooga saaran tartanka koobka yurub “Aniga go’aankaas shaqsi ahaan uma gaadhin, waxaan qabaa in go’aankaas uu yahay mid aan ka dhageystay kooxda. Aniga kaliya waxaan ahay macallin wax intaas ka badana ma jiraan,” ayuu tababare Mou u sheegay weriyayaasha.